Ayini amaketoni, futhi kungani eyingozi? - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani Ukuphuma Izindaba, Wellness Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Cindezela Umphakathi, Inkampani Inkampani, The Checkout Imininingwane Yezidakamizwa Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ayini amaketoni, futhi kungani eyingozi?
I-Ketosis, noma inqubo yokushisa amaketoni, isiphenduke igama elijwayelekile — sibonga i-carb ephansi ethandwayo Ukudla okune-ketogenic . Ngaphambi kokuba lokhu kudla kwezimfashini kuqhume ngaphesheya kwe-U.S., Ama-ketone ayaziwa kuphela kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo nalabo abanesifo sikashukela — futhi kwakungeyona into enhle. Lapha, funda ukuthi ayini amaketoni, nokuthi angaba kanjani yingozi.
Ama-ketone ngama-molecule ancibilikiswa ngamanzi akhiqizwa isibindi. Zakhiwa ngamafutha acid ngaphakathi komzimba lapho umzimba wakho ungakhiqizi i-insulin eyanele yokuguqula i-glucose ibe ngamandla, kusho UDavid Nazarian , MD, we-My Concierge MD eBeverly Hills.
iphilisi lokulawula inzalo elihamba phambili lezinduna futhi alikho inzuzo yesisindo
Kalula nje, ama-ketone (noma imizimba ye-ketone) angolunye uphethiloli olwenziwa esibindini sakho uma ingekho i-glucose eyanele (ushukela) wamandla. Lapho umzimba wakho ungenawo ushukela noma i-glucose eyanele yamandla, umzimba wakho udinga umthombo wamandla omusha. Umzimba wakho uzobe usushintshela ekwephuleni amafutha ukuze uthole amandla. Le nqubo yenziwa esibindini, lapho amafutha aguqulwa abe yikhemikhali elibizwa ngokuthi ama-ketone. Amaketoni, i-fatty acid, bese ekhishwa esibindini angene egazini lakho futhi asetshenziswe njengophethiloli wokugaya umzimba nokweseka ukusebenza kwemisipha.
Umzimba uqobo udinga amaketoni lapho amazinga e-insulin ephansi. Izibonelo zezikhathi lapho umzimba wakho ukhiqiza lo mthombo ohlukile wamandla kufaka phakathi ukuzila ukudla, ukudla ukudla okune-carb ephansi, noma ubusuku bonke lapho ulele.
Ngokungalawulwa thayipha isifo sikashukela esingu-1 , ama-ketone angakhiqizwa ngenxa yokushoda kwamaseli we-beta akhiqiza i-insulin emanyikwe noma ukungabi nawo umthombo ongaphandle, noma ongaphandle, we-insulin.
Ukukala ukukhiqizwa kwe-ketone kungenziwa ngokuhlolwa komchamo. Inani eliphephile lamaketoni emchameni liyahlukahluka kuye ngomuntu futhi kuya ngezimo zawo zempilo ezingaphansi. Ngenkathi abanye abantu bengaba namaketoni emchameni wabo futhi kuyinto ejwayelekile, abanye kufanele bakhathazeke uma kukhona i-ketone build-up ngoba lokhu kungakhombisa inkinga ebucayi kakhulu.
Iyiphi indlela enembile kunazo zonke yokulinganisa amaketoni?
Imitha yegazi noma itekisi lokuhlola umchamo wasekhaya lingasiza ekuhloleni amaketoni. Ikhithi yomchamo imvamisa iza nenkomishi nemichilo yokuhlola oyifaka emchameni. Indlela enembile kunazo zonke yokukala amaketoni, indinganiso yegolide kwezokunakekelwa kwempilo, kungokusebenzisa imitha ye-ketone yegazi (inothi: a imitha yeglucose ayilinganisi into efanayo).
Kufanele uhlole kaningi kangakanani amaketoni?
Abantu abasanda kutholakala benesifo sikashukela kufanele bahlole amazinga abo kabili nsuku zonke lapho betholakala okokuqala.Kulabo abangenaso isifo sikashukela, abafuna ukukala ama-ketone ngezizathu zokwehlisa isisindo, u-0.5 mmol / L egazini noma emchameni kusho ukuthi uzuze i-ketosis.
Ingabe amaketoni ayingozi?
Kulabo abangenaso isifo sikashukela, akuyona inkinga lapho umzimba wakho ukhiqiza amaketoni. Kodwa-ke, kubantu abanesifo sikashukela, ama-ketone angaba yingozi kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba awukwazi ukulawula i-insulin, i-glucagon, namanye ama-hormone kulabo abanesifo sikashukela.
Izinga eliphakeme lamaketoni angaba yingozi futhi angadala izingqinamba zezempilo. Izinga eliphakeme eliyingozi lamaketoni emizimbeni yethu livame ukuvela ezigulini ezinesifo sikashukela esincike ku-insulin esingazithathi i-insulin yaso, kusho uDkt. Igazi lakho liba ne-asidi kakhulu okuthi uma ingalungiswa iholele ekuqulekeni noma ekufeni.
Leli shadi lichaza izigaba zamakhemoni ezinempilo nezinengozi:
Amaketoni amabi Ngaphansi kwama-millimole ayi-0.6 ilitha (mmol / L)
Phansi ukuya ekulinganiseni 0.6 kuya ku-1.5 mmol / L
Phezulu 1.6 kuya ku-3.0 mmol / L
Phezulu kakhulu kukhulu kuno-3.0 mmol / L
Uma amazinga akho enesilinganiso esiphansi, shayela udokotela wakho ukuthi axoxe ngalawa mazinga ukuthola olunye ukuhlolwa. Ekuvakasheni kwakho, udokotela wakho uzokwenza umchamo noma ukuhlolwa kwegazi ukuthola amazinga we-ketone futhi enze ukuhlolwa kweshukela egazini. Kumazinga amakhulu kuno-1.6 kubalulekile ukufuna ukunakekelwa okuphuthumayo njengoba izimpawu zingasongela impilo.
Izimpawu zamaketoni aphezulu
Izimpawu ezihambisana namazinga aphezulu we-ketone ngokuvamile afaka:
Umlomo owomile (xerostomia)
Amazinga kashukela aphezulu (angaphezu kuka-240)
Izimpawu ezingalashiwe zingaqhubekela phambili zibe nezimpawu ezingeziwe nezimbi kakhulu kufaka phakathi:
Ukudideka noma ubunzima bokugxila
Isikhumba esomile noma esikhanyisiwe
Ukuphefumula okubonakala ngephunga lezithelo
Isifo sikashukela ketoacidosis (DKA) siyinkinga enkulu yesifo sikashukela futhi ingaba ngumphumela wamazinga we-ketone angakhulunywanga. Lokhu kuzokwenza ukuthi igazi libe ne-asidi. Lolu wudaba olubucayi nolusongela impilo olungadala ukuvuvukala kobuchopho, ikhoma likashukela noma ukufa.
umuthi omuhle wokukhwehlela nekhala eligcwele
Kuthiwani uma amaketoni ami ephakeme kakhulu?
Uma amazinga akho ephezulu kakhulu ngokususelwa ekuhlolweni kwe-ketone, kubalulekile ukufuna ukwelashwa okuphuthumayo. Kungenzeka ube nezimpawu ezibalwe ngenhla futhi kungenzeka ukuthi kungaholela ku-DKA.
Uchwepheshe wezokwelapha uzokwelapha lesi simo ngaphakathi esibhedlela. Ezinye izindlela ezijwayelekile zokwelapha yilezi:
Uketshezi lwe-IV lokusiza isiguli ekutheni singabi namanzi ngenxa yokuchama kaningi
Ukufakwa esikhundleni kwe-Electrolyte ukusiza ukukhulisa ama-electrolyte alahlekile.
I-insulini isiza umzimba ukuguqula ubuyele ekusebenziseni i-glucose esikhundleni samaketoni ukuthola amandla.
Ukuphathwa kwesifo sikashukela kuyindlela engcono yokuvikela amazinga aphezulu, angenziwa ngu:
Ukuhlola amazinga eglucose egazini njalo
Ukudla ukudla okunempilo
Ukuhlolela ama-ketone uma ushukela wegazi ungaphezulu kuka-240 mg / dl
Ukuphatha imithamo efanele ye-insulin
Ngenkathi abantu abangenaso isifo sikashukela bengaba namaketoni emchameni, i-DKA inkinga kuphela kulabo abanesifo sikashukela.
I-Humalog vs. Novolog: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
I-Toradol vs. Tramadol: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
liyini izinga likashukela elijwayelekile egazini
isikhathi esingakanani emva kocansi uhlelo b olusebenzayo
i-singulair phezu kwekhawunta noma kadokotela
yini eyenza ukutheleleka kwemvubelo kuphele
ushukela wakho wegazi kufanele ube yiphi inombolo
ziyini lezi zingquza ezibomvu emzimbeni wami
ungasusa kanjani izimpawu zomkhuhlane ngokushesha